Ny fandraketana 4K ProRes dia tsy misy raha tsy amin'ny 13GB iPhone 256 | Vaovao IPhone
Ny fandraketana 4K ProRes dia tsy misy raha tsy amin'ny 13GB iPhone 256
Ny iray amin'ireo zava-baovao farany avy amin'ny tanan'ny iPhone 13 Pro vaovao dia ny fanohanana ny endrika famoahana horonantsary ProRes, endri-javatra izay nandanian'i Apple fotoana be dia be tamin'ny fampisehoana ny taranaka vaovao amin'ny iPhone 13 Pro saingy misy fetra izany.
Araka ny hitantsika amin'ny tranokala Apple, ny fahafahan'ny firaketana an-tsary amin'ny endrika ProRes amin'ny kalitao 4K amin'ny zoro 30 isan-tsegondra dia voafetra amin'ny modely misy 256GB fitehirizana plus, mamela ny modely 128 GB, maodely izay tsy afaka mampiasa an'io endrika io amin'ny famahana 1080p fotsiny.
Apple tsy manazava ny anton'io famerana io, saingy heverina fa ny orinasa dia nihevitra fa ny 128 GB ny fitehirizana dia tsy ampy toerana hitahirizana ireo rakitra mavesatra novokarina.
Na izany aza, raha afaka nanolotra ny mety sy na misafidy ny hampiasa azy ny mpampiasa na tsia, satria ho an'ny tetikasa kely dia tsy ilaina ny manana toerana fitahirizana be dia be. Ny mazava dia ny fanarahana ny filozofia Apple, raha te hampiasa firaketana 4K amin'ny 30 fps ianao dia tsy maintsy mandoa.
La ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny 128 GB sy ny 256 GB dia 120 euro, vidiny iray raha toa ianao ka vonona ny handoa ny 1.159 euro amin'ny iPhone 13 Pro 128 GB na ny 1.259 an'ny iPhone Pro Max manana fahaiza-mitahiry mitovy, dia tsy hiditra amin'ny ezaka ara-toekarena lehibe izany.
Ny endrika ProRes dia manolotra a fahamendrehana miloko avo lenta mandray toerana kely amin'ny fitaovana, mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny fandraketana tetikasa semi-professional, na koa ireo matihanina. Ampiasaina be izy io amin'ny alàlan'ny fiasa aorian'ny famokarana ary azo haondrana mora foana amin'ny mpanonta toa ny Final Cut Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny fandraketana 4K ProRes dia tsy misy raha tsy amin'ny 13GB iPhone 256
Manana fanontaniana aho, amin'ny 4K dia tsy afaka mampiasa afa-tsy ny ProRes amin'ny 30fps fa azo ampiasaina amin'ny 1080p amin'ny 60fps?
Ao amin'ny sary nalaiko tamin'ny tranokala Apple ary nampidirina tao amin'ilay lahatsoratra, dia manondro fa afaka manoratra amin'ny endrika ProRes amin'ny 4K sy 30 fps, vahaolana iray izay ahena ho 1080 sy 30 fps ao amin'ny kinova 128 GB.
Amin'izao fotoana izao dia toa voafetra ho 30 fps ity endrika ity, mampalahelo.
Tsy maintsy miandry ny maodely iPhone manaraka isika hanararaotra an'ity endrika ity amin'ny taha ambony kokoa.
Ny iPhone 13 vaovao dia milanja kokoa ary matevina noho ny iPhone 12
Ilay Apple Watch Series 7 vaovao dia mametaka ilay mpanera mitovy amin'ilay Series 6